D & B360 dia mahatonga ny CRM hiasa mahery kokoa Martech Zone
Dun & Bradstreet efa ela ny fenitra volamena momba ny angon-drakitra kalitao. 20 taona mahery aho no niasa sy niasa tamin'ny D & B. D & B manana vahaolana miorina amin'ny rahona, D & B360, izay manome fidirana an-tserasera mivantana amin'ny angona D & B. D & B360 dia mifamatotra mivantana amin'ireo CRM ambony hanatevenana ny angon-drakitra ho an'ny mpanjifa miaraka amin'ny angon-drakitra Dun & Bradstreet misy orinasa 200 tapitrisa manerantany.
Ao amin'ny D & B, tsapanay fa ny kalitaon'ny angon-drakitra tsy manara-penitra dia iray amin'ireo fanamby lehibe amin'ny fampiharana CRM rehetra, izay miteraka fihenan'ny fivarotana ambany. D & B360 dia zavatra iray mahazo tombony amin'ny mpanjifanay avy hatrany, amin'ny alàlan'ity vahaolana amin'ny kalitaon'ny data ity. Izahay dia efa nahita ny kalitaon'ny angon-drakitra nanatsara fatratra tamin'ny mpanjifanay mpandray vao maraina. Heveriko manokana fa ny angon-drakitra avo lenta, mampiditra tsy tapaka ao amin'ny CRM dia ilaina ary ho lasa mahazatra toy ny CRM ara-tsosialy amin'ny ho avy. - Mike Sabin, SVP, Varotra sy Varotra Marketing amin'ny D & B
Azonao atao izao ny manambatra ny angon-drakitra D & B momba ny fampahalalana momba ny orinasa sy ny angona fampitaovana tokana miaraka amin'ny CRM toa Microsoft Dynamics, SAP CRM, Oracle On Demand ary Siebel CRM?
Fikarohana kaonty D & B360:
D & B360 Microsoft Dynamics CRM fampidirana:
D & B360 SAP CRM fampidirana:
Raha ny tamin'ny herinandro lasa teo Salesforce Data.com fanambarana, ity suite ity dia manao fitaovana mahery vaika tokoa ho an'ny matihanina amin'ny varotra sy ny marketing, satria manala ny banga ao amin'ny CRM anao izy ary manampy amin'ny famoahana fotoana vaovao, hanafainganana ny tsingerin'ny varotra, hahazo fahatakarana tsara kokoa ny mpanjifa ary hanatsara ny fahombiazan'ny varotra.
Afaka mandany izao ny matihanina amin'ny varotra sy ny marketing kely kokoa ny fotoana fitantanana data ary fotoana bebe kokoa hiarahana miasa amin'ny prospect sy mpanjifa sarobidy. Ny fahaizan'i D & B manadio angona dia manampy koa manatsara ny maha-marina ny fanaovana tatitra hiantohana ny fandanianao tsara ny fotoanao.
Sep 30, 2011 amin'ny 4: 25 AM
Salama, vao avy nitsidika ny tranokalanao aho ary ny fampahalalana nataonao dia tena nahaliana ahy.